fpmacreil - Teny fiainana 2
Apok 1. 4, 5a
« … Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ; ary avy amin’ny Fanahy fito izay eo anoloan’ny seza fiandrianany ; ary avy amin’i Jesosy Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin’ny maty ary Lehiben’ny mpanjaka amin’ny tany. »
Araka izany dia tononina ihany koa izao tso-drano izao tsy ho an’ny FPMA Creil ihany fa ho an’izay rehetra mitsidika izao tranonkalan’ny fiangonana izao koa.
Koa raha miteny i Jaona hoe : “Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra » dia tsy fahazarana fotsiny atao amin’ny fiatombohan’ny taratasy soratana akory izany, fa firarian-tsoa izay manondro ny fitiavan’Andriamanitra ny fiangonana ka namonjeny azy tao amin’i Jesosy Kristy. Midika koa ho fampaherezana ny fiangonana mba haharetany amin’ny finoana sy ny fijoroany ho vavolombelon’ny Tompo na mafy aza ny fanenjehana. Marihina fa, ireto fiangonana voalaza etsy ambony ireto dia niaritra ny fanenjehan’ireo jiosy tsy nanaiky an’i Jesosy ho Ilay Mesia.
Izany no fototry ny fiadanana. Tsy misy fiadanana raha tsy misy famelan-keloka. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy fifonana sy fanekena tanteraka ny fahasoavan’Andriamanitra ao amin’i Kristy, izay ampy antsika tokoa.
- azo antoka ny famonjen’Andriamanitra fa Vavolombelona marina Kristy. Vavolombelon’ny fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao Izy. Manamporofo izany indrindra ny nahatongavany tety an-tany sy ny nanolorany ny tenany teo amin’ny Hazo fijaliana. Ary amin’ny maha-Kristy nitsangana tamin’ny maty Azy dia marina Izy ka maniraka vavolombelona mahatoky, vavolombelona mpitory ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fiadanany ao amin’ny fiangonana sy eo amin’ny fiaraha-monina.
- azo antoka fa ny fiangonana dia omen’Andriamanitra hery sy fitiavana noho ny asan’Ilay Fanahy fito dia ny Fanahy Masina izany, amin’ny fijoroany ho vavolombelon’i Kristy mba hahatonga azy ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana.
- ary farany dia azo antoka ny asan’Andriamanitra sy ny toky omeny. Efa hatrizay hatrizay Andriamanitra (Ilay taloha) ary mbola velona sy miasa hatrany, ankehitriny ary ho mandrakizay.